Arday lagu Rasaaseeyey Muqdisho – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Arday lagu Rasaaseeyey Muqdisho
Inta la xaqiijiyay ilaa iyo Saddex Arday oo isla dhalatay ayaa ku dhaawacmay Rasaas ay fureen Ciidamo katirsan Dowladda Soomaaliya oo sugan Bar gadiidka lagu baaro oo ku taalla Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir.
Sababta ka dambeysay in Ciidamada Rasaasta ay furaan ayaa lagu sheegay iney aheyd mid wadada oo mashquul ah ay ku furanayeen, waxaana Ardayda ku dhaawacantay Rasaastaasi loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla Magaalada Muqdisho.
Goob jogayaal ayaa SBC, u sheegay in Saddexda Arday ee dhaawacntay lagu kala magacaabo Safiyo Daahir, Hodan Daahir, iyo Sakariye Daahir,,waxaana la tilmaamay iney dhiganayeen Iskuul gaar loo lee yahay oo lagu magacaabo Al-anwaar.
Wali laamaha Amniga ee Dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Degmada Wadajir kama aysan hadlin dhacdadaan maanta ka dhacday Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir.
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa inta badan waxa ay furaan Rasaas aan loo meel dayin xiliyada ay marayaan wadooyinka waa weyn ee Magaalada Muqdisho,waxa ayna rasaasta ay furaan dhibaato kala duwan u geystaa Dadka Shacabka ee aan waxba galabsan.
Previous articleSababaha Madax Xanuunka Keena Xilliga Soonka, Sida Looga Hortegi Karo Iyo Talooyin Muhiim Ah
Next articleShil gaari oo ka dhacay duleedka Hargeysa +Sawirro